“ရှနျးနီ ကို ရှေးရငျ သတျပဈမယျ” – အင်ျဂလနျ လကျရှေးစငျ နညျးပွကို ခွိမျးခွောကျရဲခဲ့တဲ့ ဖာဂူဆနျ - SPORTS MYANMAR
“ရှနျးနီ ကို ရှေးရငျ သတျပဈမယျ” – အင်ျဂလနျ လကျရှေးစငျ နညျးပွကို ခွိမျးခွောကျရဲခဲ့တဲ့ ဖာဂူဆနျ
ဘောလုံး အားကစား ရဲ့ နညျးပွ တှေ အကွောငျး ကို ပွောဆို တိုငျးမှာ ဆာအဲလကျဈ ဖာဂူဆနျ ရဲ့ အမညျ က မပါ မဖွဈ ရှိနေ ခဲ့ ပါတယျ ။ စကော့တလနျ သားကွီး ဟာ မနျခကျြ စတာ ယူနိုကျတကျ အသငျး ကို အင်ျဂလနျ ပွညျတှငျး မှာ သာမက ဥရောပ မှာပါ အငျအားကွီး ကလပျ အသငျး တဈသငျး ဖွဈအောငျ ဦးဆောငျ လမျးပွ ပေးနိုငျ ခဲ့ ပါတယျ ။ ယူနိုကျတကျ ကို ၂၆ နှဈ ကွာ ကိုငျတှယျ ခဲ့ပွီး အမှတျပေး ဖလား ၁၃ လုံး ကို ရယူ ပေးခဲ့ တာ ဖွဈ ပါတယျ ။
ဒီလိုမြိုး အောငျမွငျမှု ကို နှဈပေါငျး မြားစှာ ကွာအောငျ ရယူ နိုငျခဲ့ တဲ့ ဖာဂူဆနျ ဟာ အင်ျဂလိပျ ဘောလုံး လောက အပျေါ လညျး သကျရောကျမှု ကွီးမား ခဲ့ ပါတယျ ။ ၂၀၀၀ ခုနှဈ က နေ ၂၀၁၀ ခုနှဈ အတှငျး အင်ျဂလနျ လကျရှေးစငျ အသငျး ဟာ မနျခကျြ စတာ ယူနိုကျတကျ ကစား သမားတှေ အမြား အပွား ပါဝငျ ခဲ့ ပွီး ဘောလုံး အဖှဲ့ ခြုပျ နဲ့ လကျရှေးစငျ အဖှဲ့ ၀ငျတှေ အပျေါ ဖာဂူဆနျ ရဲ့ လှမျးမိုးမှု တှေ ရှိ ခဲ့ ပါတယျ ။
ဒါကွောငျ့ ကလပျ အသငျး ဖွဈတဲ့ မနျခကျြ စတာ ယူနိုကျတကျ အတှကျ အရေးပါတဲ့ ပှဲစဉျ တှေ ကစားဖို့ ရှိ လာခြိနျ မှာ အသငျး သား တှေ ကို လကျရှေးစငျ အသငျး တှေ အတှကျ မရှေးခယျြ စဖေို့ ဖာဂူဆနျ လုပျဆောငျ ကွံစညျ တာတှေ ရှိလာခဲ့ ပါတယျ ။ အထငျရှားဆုံး သော သကျသေ ကတော့ ကှငျးလယျလူ ပေါလျ စခိုး ကို လကျရှေးစငျ အသငျး ကနေ အစောကွီး အနားယူ စခေဲ့ တာပါပဲ ။
ဖာဂူဆနျ ရဲ့ နောကျထပျ ထငျရှား တဲ့ ဖွဈရပျ ကတော့ ဆဗငျ ဂိုရနျ အဲရဈဆငျ ကို ခွိမျးခွောကျ ခဲ့တာပါ ။ ဆှီဒငျ သားကွီး ဟာ အင်ျဂလနျ လကျရှေးစငျ အသငျး သမိုငျး တဈလြောကျ ဗွိတိနျ ပွငျပ ကနေ ရောကျလာတဲ့ ပထမဆုံး သော နညျးပွ ဖွဈလာ ခဲ့ ပါတယျ ။ အင်ျဂလနျ အသငျး ကို ၂၀၀၂ ကမ်ဘာ့ဖလား ပွိုငျပှဲဆီ ချေါဆောငျ ပေးခဲ့ သလို ကှာတား ဖိုငျနယျ အထိ လညျး တကျရောကျပေး နိုငျ ခဲ့ ပါတယျ ။
ဒီလို မြိုး စှမျးဆောငျမှု တှေ ရှိခဲ့တဲ့ အဲရဈဆငျ ရဲ့ အင်ျဂလနျ နညျးပွ ဘဝ မှာ အခကျခဲဆုံး သော ရငျဆိုငျရမှု က ဘောလုံး အသငျးတှေ မဟုတျခဲ့ ပါဘူး ။ ဆာအဲလကျဈ ရဲ့ အသငျး က လူတှေ ကို နိုငျငံ့ အသငျး အတှကျ ရှေးဖို့ ဆုံးဖွတျ တိုငျးမှာ စကော့သားကွီး ရဲ့ အမကျြ ဒေါသ ကို ရငျဆိုငျ ခဲ့ရတယျ လို့ အဲရဈဆငျ က ပွနျပွောငျး ပွောပွ ခဲ့ ပါတယျ ။
“သူ ကြှနျတော့ဆီ ဖုနျးဆကျ တိုငျး Hello Sven, how are you? လို့ တဈခါ မှ မပွောပါဘူး ။ အျောဟဈ သံ နဲ့ ပဲ စတာပါ ။ ကြှနျတော့ ကို သတျတော့ မယျ့ အတိုငျး ပါပဲ ။ ဒါပမေယျ့ ကြှနျတျော က အင်ျဂလနျ နိုငျငံ ရဲ့ လကျရှေးစငျ နညျးပွပါ ။ ဒါကို တှနျ့ဆုတျ နလေို့ မရ ပါဘူး”
“မှနျ နတေဲ့ အရာ ကို မှနျတဲ့ အတိုငျး လုပျရမှာ ဖွဈပွီး မှား နတော ကို မှားတဲ့ အတိုငျး တုနျ့ပွနျ ရမှာ ပါပဲ ။ ရှနျးနီ ကို ရှေးမယျ့ ကိစ်စ နဲ့ ပတျသကျ ပွီး ဖာဂူဆနျ နဲ့ အကွီး အကယျြ စကားမြား ခဲ့ ဖူး ပါတယျ ။ ၀ိနျး ကို ချေါရငျ ကြှနျတော့ ကို သတျပဈမယျ လို့ တောငျ သူ က ပွောခဲ့ တာပါ ။ ကြှနျတျော ကလညျး -ီးလား ၊ ခငျဗြား ဘာဖွဈ နတောလဲ လို့ တုနျ့ပွနျ ခဲ့ ပါတယျ”
“အဲ့ဒီ နောကျ ကွားရတာ တှေ ကတော့ အျောဟဈ သံတှေ ပါပဲ ။ သူ နဲ့ ပွောလိုကျတိုငျး ဒီလို မရေ မရာ တှေ နဲ့ ပွီးသှားခဲ့ တာပါ ။ နောကျပိုငျး မှာတော့ ကြှနျတျော တိုတို နဲ့ လိုရငျး ကို မွနျမွနျ ပဲ ပွောပါတော့ တယျ ။ ဟဲလို အဲလကျဈ ၊ ကြှနျတျော ရှနျးနီ ကို ရှေးမယျ ၊ ကောငျးသော နေ့ လေး ဖွဈပါစေ ၊ ဘိုငျ့ဘိုငျ လို့ ပွောပွီး ဖုနျးခြ လိုကျ ပါတော့တယျ” လို့ အဲရဈဆငျ က ပွနျပွောငျး ပွောပွ သှားခဲ့ ပါတယျ ။
ဖာဂူဆနျ ဟာ ၂၀၀၀ ပွညျ့နှဈ နောကျပိုငျး က စပွီး အင်ျဂလနျ ဘောလုံး အဖှဲ့ခြုပျ နဲ့ ပှဲကွီးကွပျ သူတှေ အထိ သွဇာ လှမျးမိုး သကျရောကျမှု ရှိခဲ့ ပါတယျ ။ လကျရှိ မှာတော့ ဘောလုံး ကိစ်စ တှေ ကနေ အနားယူကာ ကနျြးမာ ရေး ကို တညျဆောကျလကျြရှိ ပမေယျ့ မနျခကျြ စတာ ယူနိုကျတကျ ရဲ့ ပှဲစဉျ အခြို့ ကိုတော့ လာရောကျ ကွညျ့ရှု နဆေဲ ဖွဈ ပါတယျ ။
“ရွန်းနီ ကို ရွေးရင် သတ်ပစ်မယ်” – အင်္ဂလန် လက်ရွေးစင် နည်းပြကို ခြိမ်းခြောက်ရဲခဲ့တဲ့ ဖာဂူဆန်
ဘောလုံး အားကစား ရဲ့ နည်းပြ တွေ အကြောင်း ကို ပြောဆို တိုင်းမှာ ဆာအဲလက်စ် ဖာဂူဆန် ရဲ့ အမည် က မပါ မဖြစ် ရှိနေ ခဲ့ ပါတယ် ။ စကော့တလန် သားကြီး ဟာ မန်ချက် စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ကို အင်္ဂလန် ပြည်တွင်း မှာ သာမက ဥရောပ မှာပါ အင်အားကြီး ကလပ် အသင်း တစ်သင်း ဖြစ်အောင် ဦးဆောင် လမ်းပြ ပေးနိုင် ခဲ့ ပါတယ် ။ ယူနိုက်တက် ကို ၂၆ နှစ် ကြာ ကိုင်တွယ် ခဲ့ပြီး အမှတ်ပေး ဖလား ၁၃ လုံး ကို ရယူ ပေးခဲ့ တာ ဖြစ် ပါတယ် ။
ဒီလိုမျိုး အောင်မြင်မှု ကို နှစ်ပေါင်း များစွာ ကြာအောင် ရယူ နိုင်ခဲ့ တဲ့ ဖာဂူဆန် ဟာ အင်္ဂလိပ် ဘောလုံး လောက အပေါ် လည်း သက်ရောက်မှု ကြီးမား ခဲ့ ပါတယ် ။ ၂၀၀၀ ခုနှစ် က နေ ၂၀၁၀ ခုနှစ် အတွင်း အင်္ဂလန် လက်ရွေးစင် အသင်း ဟာ မန်ချက် စတာ ယူနိုက်တက် ကစား သမားတွေ အများ အပြား ပါဝင် ခဲ့ ပြီး ဘောလုံး အဖွဲ့ ချုပ် နဲ့ လက်ရွေးစင် အဖွဲ့ ၀င်တွေ အပေါ် ဖာဂူဆန် ရဲ့ လွှမ်းမိုးမှု တွေ ရှိ ခဲ့ ပါတယ် ။
ဒါကြောင့် ကလပ် အသင်း ဖြစ်တဲ့ မန်ချက် စတာ ယူနိုက်တက် အတွက် အရေးပါတဲ့ ပွဲစဉ် တွေ ကစားဖို့ ရှိ လာချိန် မှာ အသင်း သား တွေ ကို လက်ရွေးစင် အသင်း တွေ အတွက် မရွေးချယ် စေဖို့ ဖာဂူဆန် လုပ်ဆောင် ကြံစည် တာတွေ ရှိလာခဲ့ ပါတယ် ။ အထင်ရှားဆုံး သော သက်သေ ကတော့ ကွင်းလယ်လူ ပေါလ် စခိုး ကို လက်ရွေးစင် အသင်း ကနေ အစောကြီး အနားယူ စေခဲ့ တာပါပဲ ။
ဖာဂူဆန် ရဲ့ နောက်ထပ် ထင်ရှား တဲ့ ဖြစ်ရပ် ကတော့ ဆဗင် ဂိုရန် အဲရစ်ဆင် ကို ခြိမ်းခြောက် ခဲ့တာပါ ။ ဆွီဒင် သားကြီး ဟာ အင်္ဂလန် လက်ရွေးစင် အသင်း သမိုင်း တစ်လျောက် ဗြိတိန် ပြင်ပ ကနေ ရောက်လာတဲ့ ပထမဆုံး သော နည်းပြ ဖြစ်လာ ခဲ့ ပါတယ် ။ အင်္ဂလန် အသင်း ကို ၂၀၀၂ ကမ္ဘာ့ဖလား ပြိုင်ပွဲဆီ ခေါ်ဆောင် ပေးခဲ့ သလို ကွာတား ဖိုင်နယ် အထိ လည်း တက်ရောက်ပေး နိုင် ခဲ့ ပါတယ် ။
ဒီလို မျိုး စွမ်းဆောင်မှု တွေ ရှိခဲ့တဲ့ အဲရစ်ဆင် ရဲ့ အင်္ဂလန် နည်းပြ ဘ၀ မှာ အခက်ခဲဆုံး သော ရင်ဆိုင်ရမှု က ဘောလုံး အသင်းတွေ မဟုတ်ခဲ့ ပါဘူး ။ ဆာအဲလက်စ် ရဲ့ အသင်း က လူတွေ ကို နိုင်ငံ့ အသင်း အတွက် ရွေးဖို့ ဆုံးဖြတ် တိုင်းမှာ စကော့သားကြီး ရဲ့ အမျက် ဒေါသ ကို ရင်ဆိုင် ခဲ့ရတယ် လို့ အဲရစ်ဆင် က ပြန်ပြောင်း ပြောပြ ခဲ့ ပါတယ် ။
“သူ ကျွန်တော့ဆီ ဖုန်းဆက် တိုင်း Hello Sven, how are you? လို့ တစ်ခါ မှ မပြောပါဘူး ။ အော်ဟစ် သံ နဲ့ ပဲ စတာပါ ။ ကျွန်တော့ ကို သတ်တော့ မယ့် အတိုင်း ပါပဲ ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် က အင်္ဂလန် နိုင်ငံ ရဲ့ လက်ရွေးစင် နည်းပြပါ ။ ဒါကို တွန့်ဆုတ် နေလို့ မရ ပါဘူး”
“မှန် နေတဲ့ အရာ ကို မှန်တဲ့ အတိုင်း လုပ်ရမှာ ဖြစ်ပြီး မှား နေတာ ကို မှားတဲ့ အတိုင်း တုန့်ပြန် ရမှာ ပါပဲ ။ ရွန်းနီ ကို ရွေးမယ့် ကိစ္စ နဲ့ ပတ်သက် ပြီး ဖာဂူဆန် နဲ့ အကြီး အကျယ် စကားများ ခဲ့ ဖူး ပါတယ် ။ ၀ိန်း ကို ခေါ်ရင် ကျွန်တော့ ကို သတ်ပစ်မယ် လို့ တောင် သူ က ပြောခဲ့ တာပါ ။ ကျွန်တော် ကလည်း -ီးလား ၊ ခင်ဗျား ဘာဖြစ် နေတာလဲ လို့ တုန့်ပြန် ခဲ့ ပါတယ်”
“အဲ့ဒီ နောက် ကြားရတာ တွေ ကတော့ အော်ဟစ် သံတွေ ပါပဲ ။ သူ နဲ့ ပြောလိုက်တိုင်း ဒီလို မရေ မရာ တွေ နဲ့ ပြီးသွားခဲ့ တာပါ ။ နောက်ပိုင်း မှာတော့ ကျွန်တော် တိုတို နဲ့ လိုရင်း ကို မြန်မြန် ပဲ ပြောပါတော့ တယ် ။ ဟဲလို အဲလက်စ် ၊ ကျွန်တော် ရွန်းနီ ကို ရွေးမယ် ၊ ကောင်းသော နေ့ လေး ဖြစ်ပါစေ ၊ ဘိုင့်ဘိုင် လို့ ပြောပြီး ဖုန်းချ လိုက် ပါတော့တယ်” လို့ အဲရစ်ဆင် က ပြန်ပြောင်း ပြောပြ သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ဖာဂူဆန် ဟာ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ် နောက်ပိုင်း က စပြီး အင်္ဂလန် ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ် နဲ့ ပွဲကြီးကြပ် သူတွေ အထိ သြဇာ လွှမ်းမိုး သက်ရောက်မှု ရှိခဲ့ ပါတယ် ။ လက်ရှိ မှာတော့ ဘောလုံး ကိစ္စ တွေ ကနေ အနားယူကာ ကျန်းမာ ရေး ကို တည်ဆောက်လျက်ရှိ ပေမယ့် မန်ချက် စတာ ယူနိုက်တက် ရဲ့ ပွဲစဉ် အချို့ ကိုတော့ လာရောက် ကြည့်ရှု နေဆဲ ဖြစ် ပါတယ် ။